Mitambo, 04 Chikunguru 2019
China 4 Chikunguru 2019
Zimbabwe Yotamba neDRC neSvondo
Chikwata ichi chinonzi chaitira gadziriro yacho munhandare yeNadi Sikha Al Hadid muCairo kuEgypt, uko kuri kuitirwa mitambo yeAfcon gore rino.
Chikumi 27, 2019
Vatsigiri veNhabvu Vanoti Zimbabwe Inogona Kuenderera Mberi kuAfcon
Kunyange hazvo vari kuchema mikana yakawanda yakatambiswa nechikwata chavo mukuita mangange 1-1 neUganda, vateveri venhabvu muZimbabwe vane chivimbo chekuti chikwata chavo chicharova DRC nekubudirira kuenda munharaunda yechipiri.
Chikumi 22, 2019
Vakawanda Votarisira Kuti Zimbabwe Ibudirire kuMitambo yeAfrica Cup of Nations kuEgypt
Kunyange hazvo chikwata chemaWarriors chakakundwa neEgypt neChishanu mumutambo wekutanga mumakwikwi eAfrica Cup of Nations, vakawanda vanoti Zimbabwe inokwanisa kuenda muchikamu chechipiri chemakwikwi kana ikakwanisa kukunda Democratic Republic of Congo neUganda.
Chikumi 10, 2019
Guta reLouisville muAmerica Rinopa Nhandare Yaro yeNdege Zita raMuhammad Ali
Kutanga mwedzi uno, nhandare yendege yeLouisville International Airport, kuKentucky, ichange yave kudaidzwa kuti Louisville Muhammad Ali International Airport.
Chikumi 07, 2019
MaWarriors Anosvika muNigeria
Chikwata chema Warriors chasvika muNigeria uko chine mutambo wekuedzana masimba neNigeria pamberi pemakundano e2019 Africa Cup of Nations.
Chivabvu 28, 2019
Chikwata cheZimbabwe Warriors Chotanga Makwikwi eCosafa neMugovera
Chikwata ichi chakatarisana nehondo mbiri mumakwikwi eCosafa Cup neye Africa Cup of Nations, ayo chinofanira kukunda zvine mutsindo kutanga neCosafa Cup neMugovera.
Chivabvu 26, 2019
Charles Manyuchi Oshura Mare neKuzvambaradza Acosta wekuArgentina
Mutambi wetsiva wemuZimbabwe Charles Manyuchi nhasi mangwanani anyora imwe peji mugwaro rake rehumhizha wemutambo uyu.
Chikwata cheZimbabwe Warriors kuAfcon neCosafa Chinodomwa
Varairidzi vamaWarriors, Sunday Chidzambwa naLloyd Mutasa, vazivisa veruzhinji mazita echikwata chavo chemakundano e2019 Africa Cup of Nations finals ne Cosafa Cup.
Chikwata cheMadzimai cheCricket Chotarisira Kuenda kuWold Cup
Chikwata chemadzimai cheZimbabwe Cricket nezuro chakarova Namibia nemaranzi makumi mashanu ndokubudirira kuenda kuScotland uko chichanotamba makwikwi ekugumisira chakamirira Africa emunzira yekuenda kuWorld Cup yemaT20.
Mafaro kuDembare ne Makepeke Asi Kusuwa kuBosso muPSL
Pamitambo yakatambwa nemusi weSvondo, kwakave nemufaro mukuru mmumisha yeDynamos ne Caps United asi mhute uchiri wakakwidibira chikwata cheHighlanders.
Joel Ngodzi Odomwa Kuva Mutambi Akatamba Zvinonwisa Mvura Kana Kuti "Soccer Star"
Vanhu Vorara Vari Mumitsetse paMagaraji Vakamirira Peturu neDhiziri
ZACC Inoti Inoda Masimba eKupinda Mumatare neVasungwa Vayo
WFP Inoti Hurumende Iri Kukundika Kubatsira Vanhu Mamiriyoni Matatu Vayakavimbisa Kupa Chikafu